२०७७ असोज १२ गते सोमबार नजिक न्युज संवाददाता
चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सहीत युवा खेलाडीले नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । विश्वमा खेलको चर्चा चुलिदै गएको र नेपालमा समेत खेल प्रतिको युवा आकर्षण बढीरहेको बेला नगरपालिकाले खेलक्षेत्रका लागि कुनै पहल नगरेको आरोप युवाहरुले लगाएका छन् ।
रेबिज सप्ताहको सन्देश : कुकुर र विराला पाले भ्याक्सीन अनिवार्य
मान्छेले मानव भन्दा पनि पशुपंक्षि बढी माया गर्ने गरेको पाएको छ । निमित्त कार्यालय प्रमुख सिद्धराज जैशीको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख सुनिता मिजार रहनु भएको थियो । मिजारले रेबिज रोगबारे प्रत्येक व्यक्तिलाई सचेतना दिन जरुरी रहेको बताएकी छन् ।
कमलको फूल : जीवन–दर्शनदेखि आयुर्वेदसम्म
२०७७ असोज ११ गते आइतबार नजिक न्युज संवाददाता
२०७७ असोज १० गते शनिबार नजिक न्युज संवाददाता
चिनियाँ सम्राटका १५ दिन र एक सय २१ स्त्री
विषम संख्या पुरुषका लागि र सजिलो संख्या महिलाहरुको भनिएको छ । कुनैपनि हालतमा मानिसहरु अंक चारसँग बच्न चाहन्छन् भने अंक आठलाई सौभाग्यको प्रतिक मानिन्छ । प्राचीन चीनमा आकृतिहरु पनि नम्बरकै आधारमा निर्माण गरिन्थ्यो । सुडोकुको सुरुवाती संस्करणको पनि विकास पनि उनीहरुले नै गरेका थिए ।
कोरोनासंग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि उनले पीसीआर टेष्टका लागि स्वाब दिएकी थिइन् । शनिबार पोजेटिभ रिपोर्ट आएको र होम आइसोलेसनमा बसेको उनले बताइन् ।
पीसविनको स्थापना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा केन्दीय कार्यालयमा दीपप्रज्वलन
२०७७ असोज ०९ गते शुक्रबार नजिक न्युज संवाददाता
पीसविन २०४७ साल असोज १० गते तत्कालिन आटीचौर गाविस ४ ओलीगाउँमा सामुदायिक विकास संस्थाको नाममा स्थापना भएको थियो । पीसविनको ३१ औं बार्षिक साधारण सभा भोलि मार्तडीमा आयोजना गरिने भएको छ । संस्थाको बार्षिक गतिविधि प्रस्तुती सहीत औपचारिक कार्यक्रमका बीच साधारण सभा सञ्चालन गर्न लागिएको अध्यक्ष विमला थापाले बताएकी छन् ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि तपाईंको छातीको सिटी स्क्यान गर्नु राम्रो हुन्छ । ताकि फोक्सोमा हुने क्षति पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसपछि, तपाईंले प्रत्येक महिनामा सिटी स्क्यान जारी राख्नुपर्छ । जबसम्म फोक्सो पूर्ण रूपले निको हुँदैन ।
ट्युना, साल्मन, हिल्सा, सार्डिनजस्ता समुद्री खाना समेत ओमेगा ३ को राम्रा स्रोतहरू हुन् । यसबाहेक गाईको दूध, बदाम र अण्डाहरूको सेवन पनि हाम्रो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ ।
महानिर्देशक कुमार दाहालले दुवै देशको सरकारी संयन्त्रमार्फत नै श्रमिक पठाउने सहमति भएको बताए । ‘श्रमिक छनोट प्रक्रिया सरकारी संयन्त्रबाटै हुनेछ । यसका लागि इजरायली पक्षले विभागलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ,’ सम्झौता प्रक्रियामा सहभागी रहेका दाहालले भने ।
संविधान दिवसमा रेडियोबाटै वक्तृत्वकला सञ्चालन
२०७७ असोज ०७ गते बुधबार नजिक न्युज संवाददाता
रेडियो बुढीनन्दा मार्फत वक्तृत्वकला सञ्चालन गरिएको पीसविन स्थानीय अधिकार कार्यक्रम संयोजक पदम कठायतले बताएका छन् । बाजुरा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र क कोल्टी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर रेडियो मार्फत खुला वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको हो ।
२०७७ असोज ०५ गते सोमबार नजिक न्युज संवाददाता
ज्वरो आएको भए यात्रा गर्नु हुँदैन । विमानमा यात्रा गर्दा बिरामी महसुस भए क्र्यू मेम्बरलाई भन्नु पर्छ । भाइरसको संक्रमण भएको शंका लागेका साथी तथा परिवारका सदस्य र उनीहरुका घरपालुवा जनावरसँग खेल्नु हुँदैन ।
के हुन् अल्जाइमर्सका कारण र लक्षणहरु?
अल्जाइमर्सका बारेमा चेतना फैलाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ। अल्जाइमर्स विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिकहरुमा बढी देखिने गरेको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन्। अल्जाइमर्स भन्नाले स्मृति क्षय हुने रोगलाई बुझिन्छ। यो रोग मस्तिष्कका कोषिकाहरू नष्ट भएर हुन्छ। यो समस्याको ठोस कारण हालसम्म यकिन भएको छैन।
के हामीलाई आफुभित्रको क्षमता थाहा हुँदैन ?
मानौं खुला सडकमा तपाईं दौडन सुरु गर्नुभयो । तपाईं एउटा निश्चित गति र समयसम्म दौडन सक्नुहुन्छ । अब तपाईंले हिसाब–किताब निकाल्नुहुन्छ, ‘म यति द्रुत गतिमा दौडन सक्छु । यति समयसम्म दौडन सक्छु ।’ के तपाईंको दौडने क्षमता यत्ति नै हो ?
२०७७ असोज ०४ गते आइतबार नजिक न्युज संवाददाता
२०७७ असोज ०४ गते आइतबार एजेन्सी
कतिपय अवसरमा यी ससाना परिवर्तन कुनै ठूलो रोगका लक्षण पनि हुनसक्छन् । यिनलाई सही समयमा चिनियो भने ठूलो रोगलाई पहिल्यै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।